Kulan ay isugu yimaadeen gudiga habaynta dhulka
Shirkan oo ka dhacay Hall-ka Shirarka ee wasaaradda Qorshaynta Qaranka iyo Horumarinta ayaa waxaa gudoominayey wasiirka wasaaradda Qorshaynta Qaranka Iyo Horumarinta Dr,Sa,ad Ali Shire . waxaa ka soo qayb galay Wasaaradaha Maaliyada,Arimaha Gudaha ,Hawlaha Guud, Beeraha,Deegaanka Iyo Hayada Nabada Iyo Horumarinta ,Ujeedada Shirkan ayaa waxay ahayd sidii Looga wada tashan lahaa sidii loo kala xadayn lahaa beeraha iyo dhul daaqsimeedka .
Intii uu shirkan socday ayaa waxaa ka hadlay wasaaradaha deeganka iyo Beeraha oo sheegay inay iska kaashanayaan inay kala xadeeyaan dhulka beeraha iyo Dhul daaqsimeedka iyagoo sheegay in hore loo kala xadeeyey ,hadana aan wali la dhaqan galin.
dhinaca kale wasiirada wasaaradda Deeganka Iyo Horumarinta Reer Miyiga ayaa iyana waxay Ka war bixisay Dhibta kahaysata dhinaca kala xadaynta dhul daaqsimeedka iyo beeraha .
Dhanka kale Wasaaradda Beeraha ayaa waxay sheegtay in Dhulka Galbeedka Sidii loo kala xadeeyay ay ushaqeeyaan balse bariga aan wali la dhaqan galin waxayna balan ku qaadeen iyagoo kaashanaya wasaaradda deegaanka in ay dhaqan galin doonaan .
Intii shirkani socday ayaa waxaa laysla qaatay Qodobo dhawr ah Oo ay ka mid yihiin in wacyi galin la sameeyo kusaabsan In la dhaqan galiyo kala xadaynta dhul daaqsimeedka iyo Beeraha .
Ugu dambayn waxaa shirkan soo xidhay wasiirka wasaarada Qorshaynta Qaranka Iyo Horumarinta Dr sacad cali shire .